Facetime ma lagu isticmaali karaa daaqadaha? 5 Beddelaad Bilaash ah | Madasha Mobile
Eder Ferreno | 03/09/2021 10:30 | La cusbooneysiiyay 14/09/2021 10:29 | Barnaamijyada
FaceTime waa codsi hubaal in badan oo idinka mid ah ay yaqaaniin. Waa codsi wicitaan fiidiyow ah oo lagu rakibay si otomaatig ah aaladaha Apple, labadaba kuwa adeegsada iOS, iPadOS iyo macOS. Waad ku mahadsan tahay, waxaad wicitaanada fiidiyaha la samayn kartaa saaxiibbadaada, qoyskaaga ama saaxiibbadaada shaqada iyada oo aan wax dhibaato ah la kulmin, wada sheekaysiga shaqsi iyo kooxeed.
FaceTime waa magac caan ku ah sidoo kale adeegsadayaasha Windows, maxaa yeelay qaar badan ayaa doonaya inay awoodaan in lagu rakibo aaladooda. Nasiib darro, barnaamijkan laga heli karo oo kaliya aaladaha Apple, ugu yaraan hadda (mala -awaalku wuxuu muddo dheer ku saabsanaa qorshayaasha suurtagalka ah ee lagu bilaabayo nidaamyada kale ee hawlgalka). Sababtan awgeed, waxaa nalagu qasbay inaan raadinno beddello si aan awood ugu yeelanno inaan wicitaannadaas fiidiyaha ah ka samayno Windows.
1 Beddelka FaceTime ee Windows
1.3 Kulamada Google
1.4 Facebook Rasuulka
1.5 Kooxaha Microsoft
Beddelka FaceTime ee Windows
Dad badan oo isticmaala Windows Waxay rabaan Apple inay sii dayso nooc FaceTime ah nidaamka hawlgalka Microsoft. Suurtagalnimadan ayaa muddo dheer la isla dhexmarayay, in kasta oo ilaa hadda aysan waxba ka dhicin, markaa runtii ma garanayno haddii shirkadda Cupertino ay qorshaynayso inay soo saarto nuqulkan iyo in kale. Si kastaba xaalku ha ahaadee, maanta uma adeegsan karno barnaamijkan kumbuyuutarradayada Windows. Markaa waxaan ku khasbannahay inaan raadino beddello si aan wicitaannada fiidiyowga ah uga samaysanno PC -ga.
Warka wanaagsan ee kiiskan waa kaas Waxaa jira dhowr beddel oo FaceTime loogu talagalay Windows. Waad ku mahadsan tahay iyaga waxaan awood u yeelan doonnaa inaan helno shaqooyinka aan ka rabno wax badan oo ka socda barnaamijka Apple, taas oo ah, inaan awoodno inaan wicitaanno fiidiyow shaqsiyeed iyo koox ah. Waxaa jira dhawr ikhtiyaar oo ku yaal meeshan oo aan ka wici karno wicitaano fiidiyaha kombiyuutarkayaga Windows dhibaato la'aan. Markaa, xitaa haddii aadan haysan FaceTime kombuyuutarkaaga, waxaad adeegsan kartaa app u fuliya si isku mid ah xagga howlaha. Intaa waxaa dheer, mararka qaarkood xitaa waxaad yeelan doontaa shaqooyin dheeri ah oo la heli karo.
Zoom wuxuu noqday mid ka mid ah codsiyada inta badan la isticmaalo adduunka oo dhan sanadkii la soo dhaafay, sababtuna tahay masiibada. Barnaamijkan wuxuu noo oggolaanayaa inaan wicitaanno fiidiyow ah, shaqsi ahaan iyo koox ahaanba, ku sameyno dhammaan noocyada aaladda, oo ay ku jiraan kombiyuutarada Windows. Sidaa darteed waa beddel wanaagsan oo loogu talagalay FaceTime for Windows. Barnaamijkan ayaa sidoo kale si weyn uga dhex muuqday adeegsiga shaqsiyeed iyo shirkadaha ama waxbarashada, si aad ugu adeegsan karto xaalado badan iyo dhammaan noocyada kala duwan ee shirarka, sidoo kale aad la leedahay kooxo badan oo dad ah.
Zoom waa fududahay in la isticmaalo waxaana ka soo dejisan karnaa lacag la’aan Windows -ka. Waxaan ku abuuri karnaa qolal lagu sheekeysto, si ay suurtogal u noqoto in koox koox lala sheekeysto saaxiibbada, asxaabta ama qoyska. Sidoo kale haddii aan dooneyno in aan wadahadal shaqsi ah la yeelano dadka kale waa suurtogal. Hab wanaagsan oo wicitaanada fiidiyowga loogu yeero Windows PC -gaaga wakhti kasta, adiga oo aan isticmaalin FaceTime. Intaa waxaa dheer, wicitaanadaas waxaa jira wada sheekeysi, haddii ay dhacdo inaan rabno inaan wadaagno faylal ama aan wax qoro.
Barnaamijkan wuxuu lahaa khilaafyadiisa asturnaanta, taas oo aad loo dhaliilay, inkasta oo dhibaatooyin kala duwan lagu saxay. Taasi waa sababta ay wali u tahay beddel weyn oo ah barnaamij sida Apple, maxaa yeelay waxay na siisaa shaqooyinkeeda ugu waaweyn. Gaar ahaan adeegsiga shaqsiyeed, ma aha wax ay tahay inay keento dhibaatooyin aad u badan, laakiin shirkado badan ayaa iska ilaaliya inay adeegsadaan shaqaalahooda, iyagoo u weecanaya barnaamijyada kale.
Mid ka mid ah codsiyada wicitaanka iyo fiidiyaha ugu caansan adduunka, kaas oo suuqa ku jiray sannado badan. Skype waxay dad badani u arkaan inuu yahay barnaamijkii ugu horreeyay ee weyn arimahan, oo ay hadda leedahay Microsoft. Joogitaankiisu wuu sii yaraanayey, laakiin weli waa mid ka mid ah beddelka ugu wanaagsan ee FaceTime ee Windows, tusaale ahaan. Maaddaama ujeeddada barnaamijkan ay tahay in la noo oggolaado inaan wicitaanno iyo wicitaanno fiidiyow ah la sameyno dad kale oo ka socda PC -ga. Intaa waxaa dheer, waxaa sidoo kale lagu soo dejisan karaa nidaamyada kale ee hawlgalka, labadaba PC -ga, kiniiniga iyo casriga.
Skype waa fududahay in la isticmaalo annaguna wuxuu kuu oggolaanayaa inaad sameyso wicitaannada codka iyo wicitaannada fiidiyaha, wax suurtagal ah labadaba wada sheekaysiga shaqsiyeed iyo wada sheekaysiga kooxda. Markaa waxaad awoodi doontaa inaad adeegsato inta aad wada sheekaysanaysid asxaabtaada, qoyskaaga ama asxaabtaada dhibaato la'aan. Sanadihii la soo dhaafay, shaqooyin badan ayaa lagu daray barnaamijka, sida qoraal -hoosaadyo toos ah (oo ku habboon daqiiqado buuq badan ama dadka qaba dhibaatooyinka maqalka). Waxaa intaa dheer in la yeesho wada sheekeysi si loo qoro ama loogu diro faylasha sheekadan.
Wicitaanada iyo wicitaanada fiidiyowga ee Skype waa lacag la'aan mar walba, dhinac kale oo adeegsigiisa ka dhiga mid aad u raaxo badan. Waxaad kaliya yeelan doontaa inaad sameysato koonto ama aad isticmaasho koontadaada Microsoft (Muuqaalka ama Hotmail) si aad u gasho. Waxaad ku dari kartaa xiriirada Windows ama raadin kartaa dadka isticmaala emaylkooda ama magacooda adeegsada sidaasna waxaad ku bilaabi kartaa wada sheekeysi si fudud barnaamijka.
Google sidoo kale waxay leedahay adeeg wicitaan fiidiyow oo u gaar ah si aad uga gasho Windows -ka beddelka FaceTime. Kulanka Google waa adeeg mabda 'ahaan u jihaysan dhinaca waxbarashada ama ganacsiga, laakiin dad badani u isticmaalaan inay wicitaanno fiidiyow ah la yeeshaan asxaabtooda iyo qoyskooda. Adeegani wuxuu ku siinayaa suurtogalnimada inaad abuurto shirar kooxeed, oo qof walba ka qayb qaadan karo. Abuuraha kulankaas wuxuu la wadaagaa xiriir dadka kale, si ay u awoodaan inay galaan kulanka ama ku sheekaystaan.
Waxaad u baahan doontaa oo kaliya koonto Google (Gmail) si aad u hesho adeeggan, marka waa ikhtiyaarka ugu sahlan ee la heli karo mar walba. Is -dhexgalku wax dhibaato ah kuma qabo iyo adeeggan Google sidoo kale wuxuu bixiyaa shaqooyin badan oo dheeri ah, laga soo bilaabo qoraallada tooska ah, ilaa kartida duubista shirarka, sheekaysiga si loo diro qoraal ama faylal iyo qaar kaloo badan. Marka xagga shaqooyinka, waa beddel wanaagsan oo loogu talagalay FaceTime ee Windows, taas oo mudan in la tixgeliyo.
Kulanka Google wuxuu leeyahay noocyo kala duwan, laakiin dhowr bilood, masiibada darteed, helitaanka sifooyinka qaaliga ah ayaa la bixiyaa iyada oo aan loo baahnayn in lacag la bixiyo. Nooca caymiska waa midka bixiya shaqooyin badan waxaana loogu talagalay inta badan shirkadaha ama hay'adaha, sida dawladaha ama dugsiyada. Hadda waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa bilaash, ugu yaraan bilahaan, Google ayaa laga yaabaa inay mar kale xaddido gelitaankan mustaqbalka dhow.
Ikhtiyaarkan ayaa laga yaabaa inay dad badan la yaabto, laakiin xaqiiqadu waxay tahay in Facebook Messenger loo adeegsan karo beddelka FaceTime ee Windows. Adeegga farriinta ee shabakadda bulshada waxaa laga heli karaa biraawsarka kombiyuutarkayaga sidaasna waa suurtogal samee wicitaano shaqsi iyo kooxeed iyo wicitaano fiidyow. Waa hab kale oo wanaagsan oo aad kula xiriiri karto saaxiibbadeenna iyo qoyskeenna mar walba.
Ikhtiyaarkani waa mid si aad ah loogu sii diyaariyay adeegsiga shaqsiyeed. Saaxiibadeena Facebook-ga caadi ahaan waa saaxiibo dhab ah, isbarasho, qaraabo iyo mararka qaarkood dadka la shaqeeya. Ku sheekaysiga Messenger inta badan ma shaqeeyaan, maahan app loo adeegsaday ujeeddadan. Sidaa darteed, haddii aad raadinaysay app ama adeeg aad wicitaanno iyo wicitaanno fiidiyow kula samaysato asxaabtaada ama qoyskaaga, waa beddel kale oo wanaagsan oo laga fiirsado arrintan.
Sida inta kale ee lagu beddeli karo FaceTime ee Windows, waa ikhtiyaar bilaash ah. Waxaan kaliya u baahanahay xisaab Facebook si aad ugu gasho Messenger Windows PC -ga. Markaa waxay suurtogal noqon doontaa in si fudud PC -ga loogula sheekaysto saaxiibbada iyo qoyska. Waxaan kaloo samayn karnaa wicitaanno cod iyo wicitaanno fiidyow ah, annagoo adeegsanayna kaamirada webka ee kombiyuutarkeenna. Isticmaalka ikhtiyaarkan waa mid sahlan, sidaa darteed sidoo kale waa ikhtiyaar wanaagsan in la tixgeliyo sababtaas awgeed.
Ugu dambayn, waxaan helnaa beddel FaceTime loogu talagalay Windows taas waxaa si aad ah loogu sii diyaariyay adeegsiga xirfadeed. Kooxaha Microsoft waa mid ka mid ah codsiyada ugu badan ee la isticmaalo tan iyo 2020, masiibada darteed. Waad ku mahadsan tahay codsigan waxaad awoodi doontaa inaad xiriir la yeelato asxaabtaada shaqada, adigoo awood u leh inaad kombiyuutarkaaga ku abuurto kooxo, qolal iyo shirar, sidoo kale la jaan qaadi kara nidaamyada hawlgalka ee kala duwan. Wicitaanada maqalka iyo sidoo kale wicitaanada fiidiyaha ayaa lagu oggol yahay barnaamijkan. Inkasta oo inta badan loo adeegsado dhinaca xirfadda, haddana sidoo kale waa hab wanaagsan oo lagula xiriiro saaxiibbada iyo qoyska.
Wicitaanada fiidiyaha ee Kooxaha Microsoft waxay noqon karaan shaqsi ama koox, iyada oo taageero laga helayo kooxo waaweyn, oo ka badan 100 qof, tusaale ahaan. Taasi waa sababta barnaamijkani u noqday mid ka mid ah kuwa ugu caansan shirkadaha, ururada ama xarumaha waxbarashada, maxaa yeelay waxay u oggolaanaysaa shirarka lala yeesho kooxo badan oo dad ah. Intaa waxaa dheer, waxaa jira wada sheekeysi halkaas oo aad ku qori karto farriimo, xiriirin karto ama u diri karto faylasha dadka kale ee ka qeybgalaya wicitaanka fiidiyahaas ama kulankaas waqtigaas.
Kooxaha Microsoft sidoo kale waxay ku daraan a tiro aad u badan oo shaqooyin ah wicitaanadaada iyo wicitaanada fiidiyaha. Laga soo bilaabo cinwaan -hoosaadyo toos ah, illaa duubitaankooda iyo oggolaanshaha soo -dejintooda dambe, soo -koobitaannada wicitaannadani sidoo kale waa la abuuri karaa, ama waxaa suurtagal ah in dadka la aamusiyo inta wicitaanku socdo, si hal qof oo keliya uu u hadlo iyada oo aan kala go ’lahayn, tusaale ahaan. Hawlaheeda badan ayaa ka dhigaya mid ka mid ah aaladaha ugu caansan shirkadaha iyo hay'adaha tan iyo sannadkii hore.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Barnaamijyada » Facetime ma lagu isticmaali karaa daaqadaha? 5 Beddelaad Bilaash ah
Barnaamijkii ugu fiicnaa ee lagu sameeyo montages -ka kombiyuutarka lacag la’aan